» ‘हामी यौनबारे पाखण्डी छौँ, त्यही भएर विकृति बढिरहेको छ’
‘हामी यौनबारे पाखण्डी छौँ, त्यही भएर विकृति बढिरहेको छ’
१ पुष २०७६, मंगलवार १९:५५
ओशो रजनिशका चेलामध्ये एक ओशो सन्यासी स्वामी आनन्द अरुण ओशो तपोवनका संस्थापक हुन् । अहिले उनले देश विदेशमा गरेर १ सय ३ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । ओशोको दर्शनमा आधारित योग, ध्यान जस्ता आध्यामिक कार्यक्रमहरुलाई विश्वाव्यापी गरिरहेकास्वामी आनन्द अरुणसँग धर्म, अध्यात्म लगायत समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी :
तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
बिहान साढे ५ बजे उठ्छु । नुवाइधुवाइ गरेर बिहान ७ बजे हाम्रो सामूहिक प्रार्थना हुन्छ । नेपालभरी ७ बजे र विश्वभरी नै ओशोको सन्यासीहरुले स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजे प्रार्थना हुन्छ । हाम्रा १ सय ३ केन्द्रहरु छन्, अधिकांश केन्द्रमा बिहान ७ बजे हामी प्रार्थना गर्छौं । त्यसपछि ५ मिनेट मौन बस्छाँै हामी । त्यसपछि ध्यान हुन्छ अनि योगा हुन्छ । योगा र ध्यान सक्दा करिब १० बज्छ । योगा गरेपछि म शान्त भएर बस्छु ।
स्वामीजीको आध्यात्मिक यात्रा कहाँ पुग्यो ?
यस्तो छ, आध्यात्मिक यात्राको सुरुवात त हुन्छ तर यसको अन्त्य हुँदै हुँदैन । जहिले पनि हामी यसको मध्यमै हुन्छौँ । आध्यात्मिक यात्रा यस्तो छ कि जसले मैले पूरा गरेँ भन्छ, त्यहाँ अहङ्कार हुन्छ । यो चाहिँ सतत चलिरहने यात्रा हो । यसमा मेरो शौभाग्य छ, १० वर्ष ओशोबाहेक अरु गुरुहरुसँग रहेँ । त्यसपछि गुरुसँग चलिरहेको छु । खुसी छु म यात्रा राम्रो चलिरहेको छ । यात्राको आनन्द आइरहेको छ । लक्ष्य आनन्द हो, आनन्दित छु । म ‘इन्लाइटेन्ट भएँ, बुद्धत्व प्राप्त गरेँ’ केही मित्रहरुले यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ, म त्यससँग सहमत छैन । ओशाको मार्गमा हिँड्न पाउनुनै ठूलो उपलब्धि मान्छु म ।
भौतिकवादलाई अध्यात्मको विपरीत अर्थमा पनि लिइन्छ । भौतिकवादविना अध्यात्मवादको अस्तिस्व सम्भव छ कि छैन ? यी दुईबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ ?
यही ओशोको सबैभन्दा ठूलो देन हो । अहिलेसम्म ओशोभन्दा पूर्व धार्मिक व्यक्तिहरुको कस्तो धारणा थियो भने हामी आधात्मिक हाँै, हामीले सांसारिक गतिविधि गर्नु हुँदैन, पूरै समय ध्यान पूजा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । भौतिकवादीहरु के भन्थे भने, हामी जवान छौँ अहिले त कमाउने समय हो । मर्ने बेला गर्ने हो अध्यात्म त भन्ने धारण थियो ओशो भन्दा पूर्व । ओशाको सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति नै यही हो, उहाँले के भन्नुभयो भने भौतिकता र अध्यात्ममा कुनै विरोध छैन । एकले अर्कोलाई परिपूर्ति गर्छ । विना भौतिकता अध्यात्म सम्भव पनि हुँदैन । भौतिक सुविधा नजुटाएको भए यो कोठामा हामी कसरी अन्तरवार्ता गर्न सक्थ्यौँ । रुखको मुनी बस्नुपथ्र्यो हैन हामीले क्यामेरा नै किन्न सक्दैनथ्यौँ । त्यसकारण भौतिक सुविधा चाहिन्छ र भौतिक सुविधाले मात्रै पुग्दैन, आध्यात्मिक साधना पनि चाहिन्छ । विश्वमा ओशोको सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो, उहाँले आध्यात्म र भौतिकवादका बीचमा समन्वय गर्नुभयो । दुईवटैको अनिवार्यताको व्याखा गर्नुभयो ।
तर, भौतिकवादको नकरात्मताबाट मानिस अध्यात्मवादतर्फ लाग्छ भनिन्छ के यो सही हो ?
त्यसमा केही सत्यता छ । भौतिकवादमा लागेर जब मान्छे दुःखी हुन्छ, सन्तुष्ट हुँदैन, जो मान्छे अलि संवेदनशील छ, अधिकांश मान्छे त भौतिकवादमै अल्झिरहेको हुन्छ, उसलाई थाहै हुन्न कि भौतिकवादको सीमा के हो । मैले भन्ने गरेको छु अधिकांश व्यक्ति ‘ब्रेड एन्ड सेक्स’ र आफ्नो प्रसिद्धि यही तीन चिजमा अल्झिएका हुन्छन् । अधिकांश व्यक्ति त खान लगाउन घर बनाउन र सम्भोग गर्न यतिमै उसको जीवन दौड हुन्छ । त्यसमध्ये केही व्यक्ति हुन्छन् उनीहरु प्रसिद्धि चाहन्छन् । अधिकांश यी ३ वटा चिजबाहेक चौथो चिज चाहँदैनन्, सामान्य व्यक्ति । त्यसमा जो व्यक्ति बौद्धिक हुन्छ, जति नै प्रसिद्धि पाए पनि मर्नेबेला त आर्यघाटमा केही जाँदैन त्यहीँ छुट्छ सबै । न धन जान्छ, कहिले पनि यो चिजले सेक्सले धनले र प्रसिद्धिले कहिले पनि कसैलाई पुग्दै पुग्दैन जति भए पनि । यसले क्षणिक सुख जति पनि दिन्छ, यसमा म सहमत छु । यसले सन्तुष्ट दिँदैन । यो जब बोध हुन्छ तब व्यक्ति आध्यात्ममा लाग्छ । त्यसकारण भौतिकवादको फ्रस्टेसन जरुरी छ । तर सबैलाई हुँदैन । अधिकांश व्यक्तिले यसको व्यर्थता देख्दै देख्दैनन् । पैसाको पछाडि दगुर्दा दगुर्दा, कामवासनाको पछाडि दगुर्दा उसको जीवन समाप्त हुन्छ, त्यसको व्यर्थता देख्दैन । भाग्यशालीले मात्रै देख्छ ।
अध्यात्मवादले संसार क्षणिक छ भन्छ, भौतिकवादले अध्यात्मवादलाई प्रगतिको बाधक मान्छ, के अध्यात्मवाद प्रगतिको बाधक हो ?
यो खास गरेर कार्ल मार्क्सले यो तर्क विश्वव्यापी नै बनाए । नास्तिकहरु त सुरुदेखि नै थिए । संसारमा ईश्वरलाई नमान्ने, अध्यात्मलाई नमान्नेको कमी छैन । उनीहरुको तर्क थियो कि ‘यावत जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत’ । जबसम्म बाँच्नु छ सुखसँग बाचौँ । ऋण लिएर पनि घिउ पिऔँ । यो त चलिआएको हो भौतिकवादीहरुको धारणा । तर के छ भने त्यो घिउ पिएर हुन्छ के । भौतिकवादले सुख दिनै सक्दैन, सुविधा दिन सक्छ । सुखका लागि आध्यात्म चाहिन्छ । यसलाई चाहिँ काल मार्क्सले विश्वव्यापी गर्नुभयो । अध्यात्म चाहिँ अफिमको नसा हो । ‘रिलिजन इज द अफिम अफ सोल’ भन्नुभयो । त्यो भन्नुको पनि के बाध्यता थियो भने अध्यात्मवादले पश्चिममा अत्याचार गरेको थियो । उहाँ जहाँ जन्मिनुभयो युरोपमा, जहाँ उहाँ हुर्किनुभयो त्यहाँ चाहीँ ३ वटा धर्मको बोलवाला थियो र अहिले पनि छ, इस्लाम, क्रिस्चियानिटी र यहुदी धर्म । यो तीनवटै धर्मले त्यहाँ अत्याचार पनि गरेको थियो । यी तीनवटै धर्म अतिवादी धर्म हुन् । काल मार्क्सको ‘एक्सपोजर’ बुद्ध धर्मसँग भएन, अन्तिमसम्म । अन्तिममा केहीलाई उहाँले भन्नुभएछ कि बुद्ध धर्म जस्तो छ भने म पनि मान्न तयार छु । एक से एक नास्तिक पनि बुद्ध धर्मलाई पढेपछि उनीहरु आध्यात्मले उन्नतीमा बाधा गर्छ भन्ने मान्दै मान्दैनन् । अहिले जापानले उन्नति किन गर्यो ? एसियामा जापान नै हो सबैभन्दा धेरै उन्नति गर्ने । एक समय त सबै गरिब नै थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त जापान बर्बाद नै भइसकेको थियो । यसरी छिटो कसरी उठ्यो त्यहाँ पनि बुद्धिज्मको ठूलो हात छ । बुद्ध धर्म धेरै व्यावहारिक धर्म हो । त्यसले गर्दा जापनीहरु धेरै मिहिनेती भए, साहसी भए, उनीहरुले छिटो आर्थिक उन्नति गरे । आध्यात्मले गरिबी बढाउँदैन, समृद्धि अघि बढाउँछ । आध्यात्मले समृद्धि हुँदैन भन्नु गलत धारणा हो । आध्यात्मवादीहरुको धारणा के छ भने भौतिकवादीहरुले धर्म बिगार्छन् । यो पनि एकाङ्की धारणा हो । भौतिकवादीहरु नर्कमा जान्छन्, त्यो पनि एकाङ्की धारणा हो ।
ओशोले पहिले चोटि ‘सिन्थेटिक रिलिजन’ ल्याउनुभएको छ कि भौतिकवादले अध्यात्मवादलाई मद्दत गर्छ र अध्यात्म शिखर हो, भौतिकवाद चाहिँ आधार हो । विनाआधार शिखर बस्न सक्दैन । खालि आधार बसाएर मात्र पनि सुख आउँदैन । भौतिकवाद पृष्ठभूमि हो, अध्यात्म त्यसको शृङ्गार हो ।
अहिले संसारमा विभिन्न सम्प्रदायका धर्महरु प्रचलनमा छन् । धर्म र अध्यात्मबीच फरक के हुन्छ ? धर्म अध्यात्म हो वा अध्यात्म धर्म हो ?
अलिकति फरक छ यसमा । धर्म भनेपछि कस्तो हुन्छ भने, कुन धर्म भन्ने भइहाल्छ । शंकराचार्यको भन्नुभयो भने हिन्दू धर्ममा पनि अनेक सम्प्रदाय छन् । तान्त्रिक छन्, शक्तिका उपाशकहरु छन् । धर्म भन्ने वित्तिकै त्यसमा विशेषण जुट्छ । धर्म भनेपछि कुन धर्म, हिन्दु धर्म भने पनि कुन सम्प्रदाय ? मुसलमान भएपछि सिया कि सुन्नी भन्ने आइहाल्छ । यो धर्मको रूप हो त्यो चाहिँ आध्यात्म हैन, त्यो चाहिँ सङ्गठन हो । जस्तो राजनीतिक पार्टीहरु छन् नि माओवादी, एमाले लगायत । मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने नेपालमै एघार बाह्रवटा पार्टीहरु छन् । किन यति धेरै विभाजन हुन्छ भने हामी सही मार्क्सवादी हौँ भन्ने विश्लेषण हुन्छ । त्यस्तै शङ्काराचार्य वालाहरुले भन्छन्, हामी नै सही हिन्दु हौँ । वैष्णवहरुले के भन्छन् हामी नै सही हिन्दु हौँ । धर्म चाहिँ विश्लेषणयुक्त भएकाले विभाजन ल्याउँछ । अध्यात्म भनेको सही विज्ञान हो । विज्ञान क्रिस्चियन हुँदैन नि । विज्ञान हिन्दु पनि हुँदैन, विज्ञान त विज्ञान हो । विज्ञान भौतिक पदार्थको विज्ञान हो । अध्यात्म चाहिँ आत्माको विज्ञान या जीवनको विज्ञान हो । त्यसकारण अध्यात्म धेरै टिकाउ हुन्छ भने पछिसम्मको समयलाई समेट्न सक्छ । हामी चाहिँ सङ्गठित धर्मको पक्षमा छैनौँ, हामी शुद्ध अध्यात्मको पक्षमा छौँ ।
अहिले संसार पुँजीवादमा आधारमा अघि बढिरहेको छ, पैसा, पद, प्रतिष्ठाको पछि मान्छेहरु कुदिरहेका छन् । तपाईंले धेरै देशहरु पनि घुम्नुभएको छ, मानिसहरु अध्यामप्रतिको रुचि कस्तो छ ?
दुईवटै भइरहेको छ । एक त के भइरहेको छ भने पश्चिमका नवयुवाहरु बढी, पूर्वका कम युवाहरुमा सङ्गठित धर्मप्रति आस्था घट्दै गइरहेको छ । चर्चहरु खाली छन् । तिनीहरु बिक्रीमा छन् । अरू धर्मका मानिसले चर्चहरु किनेका छन् । विदेशका विभिन्न देशमा नेपालीले नै चर्च किनेर मन्दिर बनाइरहेका छन् । रविशंकरले ठूलो चर्च किनेर पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउनुभयो । कारण के भने युवाहरुको चर्चमा रुचि छैन । बूढाहरु मात्रै जान्छन्, आइतबार जान्छन् डेढ घण्टाका लागि अनि चर्चमा ताला लागिरहेको हुन्छ । ४० प्रतिशत व्यक्ति पश्चिममा यस्ता छन्, जो भन्छन् कि म धर्ममा विश्वास गर्दिनँ, एक प्रकारले नास्तिक छन् । त्यसकारण एकतिरबाट हेर्नुभयो भने धर्म मान्ने मान्छेहरुको सङ्ख्या घटिरहेको छ । हाम्रोमा पनि केही घटिरहेको छ ।
अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रचण्ड भौतिकवादीहरु पनि कमाएर, घर बनाएर, महँगो गाडी किनेर मात्र पनि सन्तोष भएनन् । त्यसकारण पश्चिमी जगतमा एक प्रकारको निराशा पनि छ । पूर्वीय जगतमा पनि निराशा छ तर हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । किनभने यहाँ जो निराश देख्दा पनि लाग्छ, खान लाउन पुगेको छैन होला । तर जसलाई खान लाउन पुगिरहेको छ तर पनि जीवनमा सुख र सन्तोष छैन । अहिले पश्चिममा सबैभन्दा आकर्षित धर्म चाहिँ बुद्ध धर्म भएको छ । किनभने यो ‘-यास्नल रिलिजन’को रुपमा रहेको छ । त्यो बौद्धिक धर्म हो, त्यसमा तर्क छ, धेरै क्रियाकाण्ड छैन, शुद्ध विज्ञान हो । त्यसकारण पश्चिमी जगतमा बुद्ध धर्म मान्नेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
उपनिषद् अहिलेसम्म कसैले राम्रोसँग बुझाएको छैन । उपनिषद् पनि बुद्धका उपदेश जस्तै वैज्ञानिक हुन् । तर अहिले पश्चिमी जगतमा बुद्धको दर्शन बुझाउने मानिस छन् । दलाई लामा पनि अहिले घुमिरहनुभएको छ । बुद्धधर्मको बारेमा वैज्ञाजिन ब्याखा गर्ने काममा ओशोले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको छ । अरू लामाहरु पनि धेरै छन् त्यहाँ, जेन मास्टहरु छन् । स्वामी विवेकानन्दपछि उपनिषद्को व्याख्याता राम्रा छै्रनन् । उहाँपछि उपनिषद्को धर्ममा मानिसको आकर्षण छ तर प्रचारक छैनन् ।
ओशोले धर्मलाई कुन रूपमा लिनुहुन्थ्यो ? धर्मप्रति उहाँको दृष्टिकोण के थियो ?
धर्मलाई उहाँले अन्तरको विज्ञान मान्नुहुन्छ । हिन्दु धर्ममा हुने घरपरिवार छोडेर मागेर खाने कुराको ओशो विरोधी हुनुहुन्छ । ओशोले धर्मलाई एउटा ‘डाइनामिक्स’ दिनुभएको छ । पश्चिमा जगतमा अहिले उहाँका किताबहरु खुब बिकिरहेका छन् । रुस जस्तो देशमा सायदै कसैको घर नहोला ओशोको किताब नहोस् । पश्चिमा जगतमा पनि उहाँका पुस्तकहरु धेरै चर्चित भइरहेको छ । आउने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म वा आउने ८० वर्षमा ओशो बुद्ध जतिकै समान्नित हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ओशोप्रति मानिसहरुको रुचि बढिरहेको छ । उहाँको दर्शन वैज्ञानिक छ ।
ऐतिहासिक रूपमै नेपाल आध्यात्मिक, धार्मिक भूमिका रूपमा रहेको छ । अहिले नेपालमा धर्म, अध्यात्मप्रति मानिहरुको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
यसको मामिलामा म नेपालको गरिबीलाई ठूलो अभिसाप मान्छु । गरिब मान्छेको धर्म जुन हुन्छ, त्यो गरिबीले धेरै प्रभावित भइहाल्छ । अहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा जानेहरु पनि अलि सुख सुविधा हुने ठाउँमा जागिर लागोस् । छोराछोरी सरकारी जागिरे छ भने त्यसको भन्सारमा सरुवा होस, पैसा कमाओस् – पशुपतिनाथमा गएर यस्तै कुराहरु माग्छन् किनभने हामी गरिब छौँ । किनभने गरिबको जुन धर्म हुन्छ, त्यसमा धेरै भौतिक आकाङ्क्षाहरु जोडिन्छ । त्यसकारण यो धार्मिक क्षेत्र नै हो, ऋषिमुनिहरुकै देश हो । यसलाई साँच्चै अध्यात्म फैलाउने हो भने सबैभन्दा छिटो आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ । अध्यात्मवादी भएर पनि म भन्दैछु, सबैभन्दा पहिला आर्थिक काम गर्नुपर्छ । ‘वार फुडिङ’मा यो देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अहिले एसिया नै गरिब छ । एसियामा हामी सबैभन्दा गरिब छौँ । अफगानिस्तानलाई माफ गर्न सकिन्छ, युद्ध भइरहेको छ त्यहाँ । तर हामीलाई माफ गर्न सकिँदैन । अफगानिस्तानमा स्रोत साधानको पनि कमी छ तर हामीसँग सबै प्रकारका स्रोत साधान छन् । अहिले युरेनियम पनि छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । पेट्रोल छ, प्राकृतिक सम्पदा छ । टुरिस्ट आर्कषण छ । नेपाल गरिब हुनु चाहिँ आश्चर्यजनक घटना हो । हाम्रै बेवकुफीले यो गरिब भएको हो । यो आफै धनी हुने देश हो । हामी आफैले यसलाई गरिब बनाइरहेका छौँ । अनेक पार्टी बनाएका छौँ, अनेक मूर्खता गरेका छौँ । यो देश सम्पन्न हुनासाथै उपनिषद, शिवका आध्यात्मिक क्षेत्र सबै सप्रन्छ । अनि हामी आध्यात्मिक हुन्छौँ ।
यसको मतलब हामी आफ्नो स्वार्थसिद्धि पूरा गर्न मात्र मन्दिरमा जान्छौँ ?
आधिकांश मन्दिरमा अब जुत्ताको ¥याक छ, त्यहाँ जुत्ताहरु जम्मा गर्छौं । तर जहाँ छैन, मन्दिर जाँदा हामी जुत्तातिर पनि ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ, भगवानतिर पनि ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ । अस्ति म वीरगञ्ज एउटा मन्दिर गएको थिए, १ मिनेट पनि लागेन जुत्ता चोर्न । यस्तोमा कसरी ध्यान गर्छन् मान्छेले ? यो गरिबीको कारणले भएको हो ।
तपाईं भोको हुनुहुन्छ भने भोजन पहिलो आवश्यकता हो, ध्यान पहिलो आवश्यकता हैन, अध्यात्म पहिलो आवश्यकता हैन । खाली पेट छ भने हामीले परमात्मासँग पहिला भोजन पुगेको छैन भन्ने हाम्रो आधारभूत आवश्यकता माग्छौँ नि । भाकै पेट छ भने जति सुन्दर पेन्टिङ राखे पनि त्यसको सुन्दरता देख्न सक्नुहुन्न । संगीत सुन्न सकिँदैन । त्यसैले पहिलो आवश्यकता हो भौतिक हो । भौतिक समृद्धि भएन भने मान्छे इमानदारीतापूर्वक अध्यात्ममा लाग्न सक्दैन ।
भनेपछि अध्यात्मवादको विकासको जग भनेको भौतिकवादको विकास नै हो ?
हो, अहिले पश्चिमा अध्यात्मको जन्म भइरहेको छ । ओशो तपोवनमा पनि अधिकांश मान्छे विदेशका छन् । युरोप र अमेरिकाका विकसित राष्ट्रबाट हामीलाई बोलाउँछन् । किनभने उनीहरुको खान लाउन पुगिसक्यो । उनीहरुलाई खान लाउन पुगेर पनि केही पुगेन भन्ने बोध आयो । त्यही भएर उनीहरु अध्यात्मतिर ढल्किरहेछन् ।
जस्तो यहाँले अघि चर्चा गर्नुभयो, हामीसँग युरेनियमदेखि लिएर आम प्रकृतिक स्रोत साधन छन् । तैपनि नेपाल विकास हुन सकेन भन्नुभो । यसको मतलब अब नेपालमा आध्यात्मिक विकास हुनका लागि भौतिक विकास हुन जरुरी छ ?
छ । सबैभन्दा पहिले हामीले भौतिक विकास नगरी त्यो आध्यात्मिक हुँदैन । धार्मिकतामा कहीँ न कहीँ लोभ लुकिराखेको हुन्छ । जो मान्छेले राम्रो लुगा लगाउन पाएको छैन, राम्रो खान पाएको छैन उसले कसरी बुद्धका वचन बुझ्छ ? कसरी उपनिषद् बुझ्छ ? बुझ्दै बुभ्mदैन नि । उसको मन त खान लाउनमै घुमिराख्या हुन्छ । त्यो मान्छेले कसरी बुद्धका जीवन नस्वर हो भनेर कसरी बुझ्छ ? उपनिषद्का अहम ब्रह्म, बसुदैव कुटुम्बकम कसरी बुझ्छ ? बुझ्नै सक्दैन नि । यो बसुदैव कुटुम्बकम तब पैदा भएको थियो, जब हाम्रो यो क्षेत्रलाई समृद्धिको पहाड भनिन्थ्यो । खान लागाउनका लागि बढीभन्दा बढी उब्जनी हुन्थ्यो । त्यो बेला जसको घरमा धान बढी हुन्छ, मकै बढी छ त्यो धनी हो । त्यो हामीसँग थियो । त्यो बेला नै उपनिषद् पैदा भयो । त्यही भएर जबसम्म भौतिक उन्नति हँुदैन तबसम्म आध्यात्मिक उन्नति पनि हँुदैन ।
नेपालमा यहाँले जुन आध्यात्मिक अभियान चलाइराख्नु भएको छ, त्यसको प्रभाव के कस्तो छ ?
यसको प्रभाव त पहिलो म आनन्दित छु । म खुसी छु । यो काम गरेर मलाई सन्तुष्टि मिलिरहेको छ । जब म मान्छेलाई दीक्षा दिन्छु या अहिले शिविर गराएको छु । यो काम गर्दा म खुसी हुन्छु । यो काम जुन हो, आनन्द आएन भने काम गर्नै सकिँदैन । मलाई काममा सन्तोष छ, आनन्द छ । यसमा धेरै नवयुवक साथीहरु पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँहरु पनि लाग्नुभएको छ । हेर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ । नाच्नुहुन्छ । योगा गर्नुहुन्छ । अधिकांश नेपाली खानपानको गलत अभ्यासले अहिले अस्वस्थ छन् । त्यसको तुलनामा तपोवनमा बस्ने मान्छे धेरै स्वस्थ छन् । हामी अस्पताल धाउनुपर्दैन । मेरै उमेर ७६ वर्ष भइसक्यो, म अहिलेसम्म एक पटक पनि हस्पिटलाइज हुनु परेको छैन । मलाई केही राम्रो काममा लागिरहेछु भन्ने सोचले सन्तोेष लाग्छ ।
११ डिसेम्बरमा ओशो रजनिशको जन्म जयन्ती छ, अहिलेको सन्दर्भमा ओशो दर्शनको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?
एकदम सान्दर्भिकता छ । अहिले ओशो जस्तो दर्शन फस्टाएन भने हामी अर्को विध्वंशमा जान्छौँ । एउटा विध्वंश बताउँछु म तपार्इंलाई । एउटा त तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने खतरा सधैँ रहिरहन्छ ।
एटोमेटिमक हतियार विश्वका धेरै देशसँग भइसक्यो । उनीहरुका बीचमा द्वन्द्व छ । इजरायल र अरबको बीचमा सधैँ द्वन्द्व छ । यिनीहरुको बीचमा मारामार छ । भारत र पाकिस्तानको बीचमा विगत ७० वर्षदेखि सधँै तनाव छ । तीन चार पटक युद्ध भइसक्यो । अहिले पनि भरखर भरखर युद्ध होलाझैँ भइसकेको थियो । दुवैसँग एटोमिक पावर छ । अब यो नर्थकोरिया र साउथ कोरिया बीचको सम्बन्ध मैले भन्नै पर्दैन । यो एटोमिक पावर यति खतरनाक छ कि एक जना हेड अफ दि स्टेटको मति बिग्रियो भने वा टेन्सनमा आयो भने ? किनकि मानव मस्तिष्क हो कहिलेकाहीँ तनावमा आउँछ, कहिलेकाहीँ डिप्रेसनमा आउँछ । कहिलेकाहीँ चै त्यो एकदमै निराश हुन्छ, सुसाइडल हुन्छ । मान्छेको नेचर नै हो । त्यस्तो मान्छे संसारमा खोज्न कठिन छ, जसको जीवनमा एकदुई चोटि सुसाइडल टेन्डेन्सी नआएको होस् ।
हरेक व्यक्तिले कम्तीमा १० चोटि जीवनमा एभरेजमा सुसाइडल टेन्डेन्सीबाट ग्रसित हुन्छ । त्यस्तो सुसाइडल टेन्डेन्सी यदि एटोमिक राष्ट्रको हेड अफ दि स्टेटको मनमा आइदियो र त्यसको ठीक समाधान भएन भने यो विश्व २४ घण्टाभित्र खरानी बन्छ । यत्रो ठूलो सङ्कट छ बुझ्नोस् । एउटा क्राइसिस त मैले बताए एटोमिक वारको ठूलो डर छ ।
दोस्रो सङ्कट छ विश्व तापमानको । प्रत्येक वर्ष तापक्रम बढिराखेको छ र अब १ डिग्री मात्रै तापक्रम बढ्यो भने ३० प्रतिशत हिमालय पग्लिन्छ । हिमालय पग्लियो भने के हुन्छ ? जति यो क्षेत्रका नदी छन् तिनीहरु हिमालको हिउँमा निर्भर छ । पानी सुकेपछि अहिले नै दुनियाँमा पानीको भयङ्कर अभाव छ । त्यसैले ग्लोबल वार्मिङ इज अनोदर थ्रेट । राजनीतिज्ञहरुले यो कुरा सम्बोधन गर्दैनन् ।
तेस्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ह्युमन बम । मतलब अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि । अहिले संसारमा साढे सात अरब मान्छे भइसक्यौँ । १ सय वर्ष अगाडि हामी १.५ अरब थियौँ । हामीले ६ अरब १०० वर्षमा जोड्यौँ । अब यति मान्छे संसारमा भइसक्यो कि पानीको समस्या युनिभर्सल भइसक्यो । हामी संसारको जुनसुकै देशमा जान्छौँ त्यहाँ पानीको समस्स्या छ । हामी कहाँ पनि छ पानीको समस्या छ । मान्छेलाई जति पानी चाहिन्छ, त्यसको नेपालमा, काठमाडौँ सहरमा जति पानी चाहिन्छ त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै पुगिरहेको छ । ७० प्रतिशत पानीको अभावमै छ । यो नेपालको मात्रै कहानी हैन, मुम्बईमा अहिल त्यस्तै छ । भारतको मद्रासमा अहिले पर हेड एक सातामा सात लिटर पानी दिइन्छ ।
पानीको ठूलो समस्या मदासमा पनि छ । अब एक लिटर पानीले मान्छेले खाने कि नुहाउने कि के गर्ने ? मिनिमम मान्छेलाई राम्रोसँग जिउनका लागि १ सय लिटर पानी चाहिन्छ । त्यो १ सय लिटर पानी अहिले दुनियाँका अधिकांश सहरमा पुगिराखेको छैन । यसको आवश्यकता बढी छ । ‘वाटर क्राइसिस इज गोइङ टु किल अस’।
पानीको समस्या हुन बाँकी संसारमा एउटा पनि देश बाँकी छैन । एउटा दुईवटा सानो सानो देश बाँकी होला । विश्वव्यापी पानीको समस्या भइसक्यो । भयङ्कर रूपमा पानीको समस्या भइसक्यो । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी १२ अरब भइसक्छौँ । ६० प्रतिशनत जनसङ्ख्या बढ्नेवाला छ । त्यसपछि विश्व नर्क बन्नेवाला छ । त्यसपछि के हुन्छ भने खानलाई पानी हुँदैन । हिँड्नलाई दुई तीन घण्टा जाम नभई हिँड्न सकिँदैन । प्रदूषण बढ्छ ।
त्यही भएर अहिले ओशोको आवश्यकता छ । जब म ओशोमा लागेँ त्यतिबेला इन्डियामा जनसङ्ख्या करिब करिब ४५ करोड थियो र संसारको जनसङ्ख्या साढे तीन अरब थियो । त्यो बेलादेखि ओशो कराउनुभयो कि अनिवार्य रूपमा परिवार नियोजन गर । यदि यसो नगर्ने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हामी डबल हुन्छौँ । डबल भएपछि खाना त छोडौँ । पानी पनि पाउँदैन । ओशोले यो ६० वर्षअघिबाट कराइराख्नु भएको छ । आज ओशोको सान्दर्भिकता एकदमै बढी छ । जति ढिला गर्छौँ हामी ओशोलाई बुझ्नलाई त्यति नै मानव सङ्कट बढ्दै जान्छ ।
तपाईंको राजनीतिक दलका उच्चतहको व्यक्तिसँग पनि धेरै भेटघाट हुनेगर्छ । उहाँहरुमा अध्यात्मिक तहको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने वहाँहरुले आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी राख्नका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्नु पर्छ । उनीहरुको सरुवा, बढुवा, मागहरुको सवालमा हरेक मन्त्रीहरुको घरमा कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गर्छ । कार्यकर्ताको महत्त्वकाङ्क्षा पुरा गरिएन भने भोलि चुनाव लड्न नसक्ने भन्ने हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिलाई आध्यात्म गर्न फुर्सद नै छैन । यो राजनीतिक सिस्टमले राजनीतिक व्यक्तिलाई पनि सुख छैन । २४ घण्टा दौडेको दौडेकै छन् । सबै राजनीतिक व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको बारेमा ध्यान दिने समय छैन । अनेक रोग लाग्छन् । कति राजनीतिक व्यक्तिहरु अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ । राजनीतिक व्यक्तिले समयको व्यवस्थापन नै गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । यो राजनीतिक सिस्टममा राजनीतिकर्मी पनि एकदमै व्यस्त छन् । अलिकति उहाँहरुको पनि राजनीतिक अहंकार सिवाय केही पनि मिल्दैन,खान पनि फुर्सद छैन् । सुत्न, आफ्नो परिवारलाई पनि समय छैन भने भएका सुविधालाई उपभोग गर्न पनि समय छैन । ५ दिन कुनै ठाउँमा म गएर विश्राम गरौँ भने कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई समय छैन । जब कि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले हरेक ३, ४ महिनामा ७, ७ दिन बोटिङ गर्ने, गल्फ खेल्न जाने गरेका छन् । अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पनि विश्राम गर्छन् । माइन्ड फ्रेस गर्छन् । हाम्रा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई त्यो सुविधा हामीले दिन सकेका छैनौँ । समय व्यवस्थापनको लागि राजनीतिकमा व्यापक सुधारको आवश्यक छ । हरेक पार्टीका केही व्यक्ति आध्यात्मिक छन्, ओशोमा छन् । तर ती व्यक्तिहरु चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ ।
मान्छेको अनिवार्य आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास र सहवास भनिन्छ । सहवासको विषय बढी किन विवादित भयो ?
विषय नै त्यस्तै छ । गाईवस्तु, चराचुरुङ्गी बाँदर कही पनि सेक्सको समस्या छैन । मनुस्यमा मात्रै किन छ भने सेक्सलाई हामीले प्राकृतिक रुपमा स्वीकार गरिराखेको छैनौँ । सेक्स प्राकृतिक कुरा भएको हुँदा यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने ओशोको भनाइ छ । यसलाई ‘पाप छ, ठीक छैन्, गलत छ’ भनिरहँदा त्यस्ता कुराहरुले नै समाजमा विकृति फैलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा यौन हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
सेक्सको समस्या ठूला ठूला राजनीतिक व्यक्तिमा पनि भएको सुन्नुभयो । राजनीतिकभन्दा पनि बढी ठूला ठूला धर्मगुरुहरुमा बढी छ । तर यो नठान्नुस् कि राजनीतिककर्मी र धर्मगुरु नभएका व्यक्तिमा सेक्सको समस्या छैन । धर्मगुरु र राजनीतिकर्मी मिडियामा बढी छाउँछन् । नाम चलेका व्यक्तिको सञ्चार माध्यममा कथा छापिन्छ । सामान्य व्यक्तिको कथा छापिँदैन मिडियामा आउँदैन । त्यसकारणले सेक्स नेता र धर्मगुरुको मात्रै समस्या हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । रातोकथा सबैको छ ।
यो अहिलेको मनुस्यताको समस्या हो । अहिलेको जुन मानव विकास छ । जसरी हामीलाई समाजले पाखण्डी बनाइराखेको छ । यो पाखण्डी समाज हो यहाँ खाने दाँत र देखाउने दुईवटा दाँत छन् । सबैलाई आफू शिष्ट, सेक्सको मामिलामा पवित्र भएको देखाउनुपर्ने छ । भित्र चाहिँ उसको व्यवहार अर्कै हुन्छ । यो झुटा व्यक्तित्व जुन हाम्रो समाजले खडा गरेको छ यसैले सबै भइरहेको छ ।
ओशो सेक्सलाई प्राकृतिक रुपमा स्वीकार गर भन्नुहुन्छ । यो किन उपद्रो छ ? सारा मानसिक रोगहरु अहिले छन् ? त्यसको कारक नै सेक्स हो ।
त्यसो भए यौनको मामिलामा आदर्शको नाटक गरिन्छ ?
ठीक भन्नुभयो तपाईंले । आदर्शको नाटक भयो । ब्रह्माचार्य थोरै मानिसका लागि मात्रै सम्भव छ । हजारमा एक पनि सायद हुँदैन । सबै धार्मिक व्यक्तिले ब्रह्माचारी बन्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो तर त्यो सम्भव हुँदैन । मानिसले न सन्यास लिन्छ तर जिउको हर्मोन वा रसायनले त सन्यास लिँदैन । उसलाई भोक लाग्छ । धार्मिक व्यक्तिले किन खानुभयो त भन्नुहुन्न । धार्मिक व्यक्तिलाई पसिना किन आयो, किन गन्हायो भन्न मिल्दैन । किनभने पसिनाको त गन्ध आउँछ । दिसापिसाब पनि जानैपर्छ । सबै प्राकृतिक चिज गर्नुपर्छ, हुन्छ भने सेक्स किन हुन्न ? सेक्स पनि त प्राकृतिक हर्मोन हो । त्यसलाई यसरी स्वीकारिएर ल्याएको भए धार्मिक व्यक्तिहरु जेल जाने थिएन ।
हामीले सोच्यौँ, स्वामी, सन्यासी वा धार्मिक व्यक्ति हुनेवित्तिकै सेक्सबाट अलग हुनुपर्छ । तर त्यो कसरी सम्भव छ ? शरीरको रसायनलाई थोरै थाहा छ कि तपाईं गृहस्थ, सन्यासी, स्वामी वा धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर ? दिसा, पिसाब भोक जस्तै यौन पनि प्राकृतिक चिज हो भनेर सहज ढङ्गले बुझियो भने यो समस्यालाई छिटो समाधान गर्न सकिन्थ्यो । नाम चलेका राजनेता, कलाकार, पत्रकार वा कुनै पनि व्यक्तिसँग हामी के अप्राकृति अपेक्षा गर्छौं भने उनीहरु सेक्सबाट मुक्त भएको होस् । उनीहरु अर्कै लोकबाट उत्रिएका, गङ्गा स्नान गरेका मानिस होऊन्, उसमा वासना, इच्छा हुँदै हुँदैन भनेर भन्नु हाम्रो चाहनाको कमजोरी हो । अहिले यौनसँग जोडिएर भइरहेका घटनाहरुमा व्यक्तिको दोष होइन । व्यक्तिलाई माफ गर्न सकिन्छ तर प्रणालीलाई माफ गर्न सकिन्न ।
२१ औँ शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमै यौनप्रति एउटा उदार दृष्टिकोणले जन्म लिएको छ । पश्चिममा त धेरै भइसक्यो । हामीहरु अलिकति रुढीवादी, परम्परावादी छौँ र हामीकहाँ कुनै कुरा हुनलाई समय लाग्छ । पश्चिमी जगत्मा लिभिङ टुगेदर (विवाह नै नगरीकन जीवन साथ विताउने) संस्कार नै आइसक्यो ।
पत्नीको पनि केटासाथी (ब्वाइफ्रेन्ड) वा पतिको पनि केटी साथी छ भने पति वा पत्नीले त्यति ‘माइन्ड’ गर्दैन । पश्चिमा जगत्मा धेरै कुराहरु स्वीकार्य नै भइसक्यो । एक प्रकारको उदार दृष्टिकोण पैदा भइरहेको छ पश्चिमा जगत्मा । हामीकहाँ पनि भइरहेको छ, नभएको होइन । हिजो महिलालाई दबाएर राखिएको थियो, उनीहरुको धेरै शोषण भएको थियो, अहिले उनीहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन् र त्यो सुरु भएको छ ।
काम अर्थात् सेक्सको बारेमा विश्वव्यापी रूपम नै उदारवादी धारणा विकास भइरहेको छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश यस्तो छ कि कुनै चिज आउनलाई समय लाग्छ । कतिपय कुराहरुलाई ग्रहण गर्न समय लाग्दैन । जस्तो, जिन्स पाइन्ट अमेरिकामा चल्यो भने यहाँ तुरुन्तै आइहाल्छ । जबकि जिन्स पाइन्ट लगाउने हाम्रो संस्कार, प्रचलन होइन । जिन्स पाइन्ट लगाएर मात्र पुग्दैन ।
उनीहरुले त्यसमा ठाउँ ठाउँमा च्यातेको हुन्छ । त्यसको उपयोगिता त देखिँदैन । तर अमेरिकामा जिन्स प्यान्ट च्यातेको छ भने नेपालमा पनि तुरुन्तै त्यसरी नै च्यातिहाल्छ । भन्नुको अर्थ, यी चिजहरु, पिजा, कोकोकोला लगायतका चीजहरु हामी अति छिटो ग्रहण गर्छौं, स्वीकार्छौं । तर पश्चिमा जगत्मा जुन सामाजिक क्रान्ति, उदारवादी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो कुरालाई स्वीकार्न, ग्रहण गर्न चाहिँ हामी समय लगाउँछौँ । तर त्यो हुन्छ, समयको मागलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
यो पिढी सङ्क्रमणको समयमा भएकाले दुःख पाउँछ । सङ्क्रमणको कालमा रहेको यो पिढीलाई अलि सङ्कट छ । त्यसमा ओशोको विचार औषधि हो । त्यसकारण हामी नेपालमा १०३ ध्यान केन्द्रहरु खोलेर दुई हजार व्यक्तिलाई मैले नै दीक्षा दिएको छु । नब्बे हजार व्यक्ति उदार मनोवृत्तिका छन् । हरेक विषयमा ओशोको दृष्टिकोण रुढीवादी छैन, व्यापक र उदार छ । त्यो विषयमा सेक्स, सामाजिक व्यवहार, पैसा पनि पर्छ । हाम्रो दृष्टिकोण बडो उदार र खुला छ । विस्तारै त्यसको प्रभाव देखिँदै जानेछ । हामी समुद्रमा एक बोरा चिनी हालेर एकै दिनमा समुद्र त गुलियो हुँदैन । तैपनि प्रयास त गर्नुपर्छ । अहिले हामीले हरेक सन्यासीले पाँचवटा रुख रोपौँ भनेर अभियान सुरु गरेका छौँ ।
हामी नब्बे हजार सन्यासी छौँ । हामीले प्रत्येक वर्ष रोप्यौँ र जोगायौँ भने साढे चार लाख रुख जोगिन्छ । हामीले रोप्ने ती रुखहरुले अहिले काटिइराखेका रुखहरुको भरपाई, क्षतिपूर्ति त गर्दैन । तर पनि प्रयास त गर्नुपर्यो । हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । हाम्रो वाणगङ्गा कम्युनमा खोला छ, देशका हरेक खोलाहरुमा शोषण भएको छ, पानी सुक्दै गइरहेको छ । खोलामा तीन चार महिना मात्रै पानी हुन्छ । बर्खा बाहेकको बाँकी समयमा त्यो नाला जस्तो मात्रै हुन्छ । बुद्धको गाउँबाट बगेको ऐतिहासिक वाणगङ्गा नदीको किनारमा त्यसलाई संरक्षण गर्न एक लाख रुख लगाउने सङ्कल्प गरेका छौँ । त्यो गरेर त्यो नदीलाई हामी जीवित राख्ने छौँ ।
यी सब हामी गरेका छौँ । यसको राष्ट्रमा प्रभाव पर्नेछ । हामी राष्ट्रिय जागरण अभियान लिएर घुम्ने छौँ । हामी सबै नेपालीलाई बच्चा कम पैदा गरेर रुख रोप्न आह्वान गर्छौं । एक सम्पत्ति, एक सन्तति र प्रत्येक व्यक्तिले पाँचवटा रुख रोपौँ भन्ने हाम्रो नारा छ । हामी पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रयास जारी राख्नेछौँ ।
हाम्रो प्रयत्न हुनेछ : जनसङ्ख्या नियन्त्रित होस् र हरियाली बढोस् । अनि विचारमा पनि व्यक्ति उदार बनून् । हामी धर्मान्ध, विचारको अन्ध र मेरै विचार ठीक छ, बाँकी सब गलत छ भन्ने एक प्रकारको बहुत ठूलो हिंसाबाट बचौँ । यो विश्वमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट ल्याउने हिंसा हो । यो हिंसाबाट मुक्त हुनुपर्छ । जुन व्यक्ति यो ठान्छ ः मेरो विचार सर्वश्रेष्ठ हो, अरूको विचार निकृष्ट हो ः हिंस्रक मान्छे हो । त्यसको विरुद्धमा हामीले अभियान चलाएका छौँ । अरूको विचार सुनौँ, ऊ पनि सही हुन सक्छ : यति चाहिँ उदारता लिऔँ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हो ।
मेरो हजुरबाले रोपेको रुखको आँप अहिले मैले खाइरहेको छु । मैले रोपेँ भने मेरा सन्ततिले खाला ।
११ डिसेम्बर अर्थात् ओशोको जन्मजयन्तीमा तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ? कुनै नयाँ खालको कार्यक्रमहरु पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
हरेक ओशो उत्सवमा हामी सबैलाई स्मरण गराउँछौँ कि वर्षमा पाँचवटा रुख रोपौँ र हुर्काऔँ र एउटाभन्दा बढी बच्चा पैदा नगरौँ । कोही पूर्णकालीन फुर्सदमा छन् भने बच्चा नै नबनाऔँ बरु थुप्रै सडक बालबालिकाहरु छन्, तिनलाई पालौँ । आफ्नो जीवनमा पूरै समय अध्यात्ममा दिने सोच छ भने बच्चा नै नबनाऔँ । आफ्नै बच्चा बनाउने मन भएका दम्पतीले पनि एउटा भन्दा बढी नबनाऔँ । यसलाई हामीले राष्ट्रिय अभियान नै बनाएका छौँ ।
त्यसबाहेक, सांस्कृति कार्यक्रम, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरु गर्छौं, साथीभाइहरुसँग चियापान तथा ओशोका दर्शनका बारेमा पुस्तक, अडियो भिडियोहरु चलाउँछौँ ।
त्यसबाहेक हामीले एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेका छौँ : कम्तीमा तीन चोटि बिहान ७ बजे, दिउँसो १२ बजे र साँझ ८ बजे हामीले सात सात मिनेटको प्रार्थना गरौँ । यो हामीले संसारभरि नै सुरु गरेका छौँ । नेपालबाट यो सुरु भएको १५ दिन मात्रै भएको छ र संसारभरि नै विस्तारै हाम्रा केन्द्रहरुले यो अभ्यास गर्दै जानेछन् ।
सबैलाई हाम्रो आग्रह छः सक्नुहुन्छ अरू ध्यानहरु गर्नोस्, अन्यथा बिहान १ चोटि आफ्ना गुरुलाई, बुद्धलाई, जसमा ओशो, गौतमबुद्ध, कृष्ण, मोहम्मद, जिसस पनि पर्नुहुन्छ । जुन गुरु तपाईंको हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गरेर तीन चोटि नमन गर्नुहोस् । बुद्धम शरणम् गच्छामि : धर्ममः शरणम् गच्छामिः सङ्घम् शरणम् गच्छामिः भनेर संसारभरिकै सबै ध्यान केन्द्रहरुलाई नमन गर्नुहोस् । यो बुद्धका मात्रै हैन, यो एक्काइसौँ शताब्दीकै धार्मिक प्रयोग हो । यसले मन शान्त हुन्छ ।
मोहम्मदले पाँच चोटि सामूहिक प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो । हामी तीन चोटि किन गर्न सक्दैनौँ । दिनको तीन पटक सात सात मिनेट ध्यान गर्दा २१ मिनेट मात्रै लाग्छ तर त्यसले मनको स्नान हुन्छ, मनको शुद्धि हुन्छ । हामी प्रयोग गरिरहेको यो विधिलाई अपनाउन हामी ११ डिसेम्बरको दिन हरेक केन्द्रलाई हामी आग्रह गर्छौं ।
१०३ केन्द्रमा ९० हजार सन्यासी आबद्ध छौँ र एक सन्यासीसँग १० जना गैरसन्यासी जोडिएका छन् । त्यसकारण हाम्रो सङ्ख्या अहिले नौ लाख छ । हामी उहाँहरु सबैलाई दिनको तीन पल्ट ७ मिनेटको प्रार्थना गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्छौं ।
ओशोका सन्यासी र अरू धर्मसँग सम्बन्धित पनि सन्यासीहरु हुन्छन् । सामान्यतः सन्यासी भनेको घरपरिवार, मायामोह, धनसम्पत्ति सबै परित्याग गरेर ध्यान साधना गर्ने व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । त्यो सन्यासी र ओशो सन्यासीमा के फरक हुन्छ ?
पुरानो सन्यास जीवनविरोधी थियो । त्यसले अध्यात्मलाई मात्रै मान्थ्यो, भौतिकवादलाई मान्दैनथियो । कि बौद्ध भिक्षु जस्तो मागेर खाने, कि आश्रममा बसेर खाने, उपार्जन नगर्ने, मानिसले मठ मन्दिरमा दिएको चन्दाबाट खाने भन्ने धारणा थियो । हामी त्यसको विरोधी छौँ । हामी के भन्छौँ भने मागेर खाने होइन, बाँडेर खानुपर्छ । हामी जति कमाउँछौँ, त्यसको कम्तीमा १० प्रतिशत बाँड्नुपर्छ । हाम्रो सन्यासको यो धारणा छ ।
कमाइको १० प्रतिशत निमुखा, कमाइ नभएका तथा आवश्यकता भएकाकोमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसकारण ओशो सन्यास बाँडेर खाने संन्यास हो, मागेर खाने संन्यास होइन । हामी आफ्नो बाहुबलले उपार्जन गर्छौं, अधिकांश सन्यासीहरुको पेसा छ । आश्रममा हामी ७० जना जति सन्यासी बस्छौँ ।
तर यो नठान्नुहोस् कि हामी काम गर्दैनौँ । बाहिरको मानिसले १० देखि ५ काम गर्छ । हामी बिहान ७ देखि रातिको १० बजेसम्म काम गर्छौं । अरू मानिसलाई शनिबार बिदा हुन्छ, हामीलाई शनिबार नै सबैभन्दा बढी काम हुन्छ । हामी हप्ताको सातै दिन, वर्षको ३६५ दिन काम गर्छौंं, सात घण्टा मात्रै काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ, जबसम्म काम सकिँदैन, हामी बाह्रै घण्टा पनि काम गर्छौं । त्यसकारण हामी बाहिरका व्यक्तिभन्दा बढी कर्मठ छौँ । हाम्रा सन्यासीहरुको सक्रियता बाहिरका व्यक्तिहरुभन्दा बढी छ ।
यही फरक छ हाम्रो संन्यासमा । हाम्रो संन्यास रचनात्मक सन्यास हो । यो पलायनवादी हैन, सिर्जनवादी संन्यास हो । रातोपाटी डटकमका लागि शम्भु दंगालले गरेको कुराकानी साभार
आज ३३औँ विश्व एड्स दिवस
सहिद स्मारकमा आदिवासी जनजाति संग्रहालय
मकवानपुरगढी दरबार घुम्न अब शुल्क तिर्नुपर्ने
कोरोना संक्रमणपछि सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना
मकवानपुरमा ५ सहित मुलुकभर ४०३ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिँदै
आज गुरुनानक जयन्ती मनाइँदै